PerfectBanner: Ule, njikarịcha, na akpaaka maka ọkọlọtọ Mgbasa ozi esighi na | Martech Zone
Anyị nwere ọkọlọtọ mgbasa ozi na saịtị anyị ma m ga-anabatakarị ọtụtụ ọnọdụ nke ọkọlọtọ mgbasa ozi maka ndị mgbasa ozi anyị kachasị ama. Ha ghotara na ha agaghi erughari okporo uzo ebe a belughi ma ha nwale ma bulie mgbasa ozi ha.
Nke ahụ bụ ọrụ siri ike na ọtụtụ sistemụ, gụnyere Google. Have ga-ebugote ọtụtụ oge, wee hapụ ha ka ha gbaa ọsọ ogologo oge iji nweta ndaba ndekọ ọnụ ọgụgụ (nke nwere ike iwe ogologo oge ma ọ bụrụ na ọnụọgụ pịa-dị obere), bulite ma nwalee mgbanwe ọzọ gị, wee gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ịnọghị n'elu ihe, nke ahụ nwere ike iwe obere oge.
Zuru okè auto-enhances AdWords ngosi mgbasa ozi 'ihe okike, gụnyere agba, onyonyo, ozi na ndị ọzọ. Algọridim ha emeela ka ọnụego ntụgharị nke 30-179% gosipụtara maka ndị ahịa ha.
Perfectbanner Display Ad Testing Atụmatụ
Pụrụ iche Generator Speed - Akpadoro nke ọma maka ịmepụta ọkọlọtọ ma meziwanye ha na akpaghị aka, onye na-enye anyị ọkọlọtọ ga-ahapụ gị ịmepụta mgbasa ozi ma tọọ ule n'egbughị oge
Gbanwee Algọridim - Kama ịchọta ndị mmeri, algorithm anyị na-achọpụta ma dobe ọdịiche ọkọlọtọ na-efunahụ, si otú a na-abawanye arụmọrụ arụmọrụ nke ọma.
Igwe ihe igwe - Algọridim nke Perfectbanner na-esikwu ike na data akụkọ ihe mere eme na, dịka ọmụmaatụ, mụta ụdị agba nke na-ewepụta ọtụtụ clicks. You na - ejikarị ya mara ihe na ọ ka mma.
Akpaka Testing kwụ n'ahịrị - The algọridim na-akpaghị aka na-emejuputa emeri mgbanwe si otu ule na-esote, ruo mgbe ọ na-eme ihe zuru okè ọkọlọtọ.
Ọ dị mfe iji - Onye nrụpụta ọkọlọtọ pụrụ iche, raara onwe ya nye ndị ọrụ mgbasa ozi yana algorithm na-emewanyewanye nke ọma na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka ọ dịrị gị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
Nye ọnụahịa na-aga n'ihu, naanị (US) $ 0.02 / CPM n'okpuru 150kb na $ 0.02 / GB karịrị 150kb. Ha na-enye nnabata CDN maka $ 0.10 / GB.
The Zuru okè a na-etinyekwa ikpo okwu na netwọkụ mgbasa ozi isi ndị ọzọ, gụnyere adgear, adgenius, AdMarvel, AdRoll, adSpeed, ADTECH, Adtraction, adrecord, ads serve, AdXpansion, adzerk, Affiliator, appnexus, atlas by Facebook, bidtheatre, choozle, criteo, cxense Data Ahịa, ReachLocal, Revive, Sitescout, Sizmek, Smart Ad Server, SpecificMedia, theradeDesk, Tradedoubler, TradeTracker, TrafficForce, Undertone, Voluum, Xaxis na Zedo (na ndị ọzọ na-abịa).
Tags: ule ulead ọkọlọtọadgearadeniusAdMarveladrecordchieAdSpeedmgbasa oziNtọalakpọsaanụMgbasawanyeadzerkMgbakwunyengwama ọ bụ Facebookọkọlọtọ mgbasa oziụlọ egwuregwuchoozleedekọAgụụDataXuỌrụ Deltanke DSPngosipụta mgbasa oziUgboro abụọ.netUgboro abụọ nke Googleegasstinye aka BDRepomMgbasa ozinwepuFlurryIhe na-enyeAraMgbasa ozimopubnnwale dị iche ichenwezeNetReferOpenXNdị na-ege ntị zuru okèonye zuru okeNkọwapụtaMarketing RakuteniruNtughariSaịtịSizmekSmart Ad ServerMedia pụrụ ichetestingtheDradeDeskTradedoublerAzụmahịaOkporo ụzọMechieVoluumXaxisZedo